रुपान्तरणको पर्खाइमा चार ‘शाला’ – Chitwan Post
साउनको तेश्रो हप्ता शुक्रबारको दिन कार्यालयको काम सकी घर फर्कने क्रममा बबरमहलस्थित स्टपबाट नेपाल यातायात चढेर थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालीमाटी, बल्खु, सानेपा हुँदै एकान्तकुनासम्मको यात्रामा थिएँ । यस्तो यात्रा कामै नपर्दा पनि कहिलेकाहीँ चक्रपथ चक्कर लाउने गरी पनि गर्ने गर्दछु । अहिलेको गतिविधि बुझ्न सहयोगी हुने यी यात्राहरु चिन्ता होइन चिन्तनसहितका हुने गर्दछन् । धन्य छ उक्त बसयात्रा जसले मथिंगललाई समेत घुमाउने केही विचारहरु मनमा सञ्चार गरिदिए । तीमध्ये एउटा विषयलाई यो लेखमा उठाउन खोजेको छु, आशा छ पाठकको उत्सुकतालाई मेटाउने झिनो प्रयास सफल हुनेछ ।
नेपालको विकासका लागि केकस्ता शालाहरु जिम्मेवार छन् ? कुन कुन शाला कुन अर्थमा साधक छन् र कुन कुन शाला कुन अर्थमा बाधक छन् ? भनेर मेरो मनले मन्थन गर्ने पहल ग¥यो । सान्दर्भिक शालाहरुको मनमनै संकलन गरेँ, घरमा पुगेर बृहत् नेपाली शव्दकोष नियालेँ अनि कुन कुनका बारेमा लेखूँ भनेर घोत्लिएँ । हुन त, मैले शालाहरुको लामै सूची बनाउन सक्थेँ होला, तर जम्माजम्मी ८ वटाभन्दा माथि जान मन लागेन । ती थिए पाठशाला, प्रयोगशाला, रंगशाला, कार्यशाला, धर्मशाला, वधशाला, मधुशाला र वेधशाला । यीमध्ये आधुनिक वधशाला बनाउन सके राम्रो हुने र अन्तरिक्ष अध्ययनसम्बन्धी वेधशालाको कुरालाई उचित स्थान दिनुपर्ने मनन गर्दै लेखन सूचीबाट हटाउन चाहेँ । हामी हरेक टोल वा गाउँमा मन्दिर भएको देशका बासिन्दा हौँ । सबैजसो धार्मिकस्थलमा धर्मशालाको पनि व्यवस्था देखिन्छ, भलै ती व्यवस्थित नहून् । अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने त बाहिरबाट जाने मनुवा नै हुन्, ती धर्मशालाको के दोष ? यति चिन्तन गरेर धर्मशालासम्बन्धी लेखनलाई थाती राखेँ । प्रयोगशाला पनि बढीजसो विज्ञानमा प्रयोग हुने सुनेको छु, तसर्थ नेपालमा पनि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने खोज अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने खाँचो महसुस भयो । साथै, नेपाललाई विचार वा राजनीतिको अनि व्यवस्थाको प्रयोगशालामा सीमित नराखे हुन्थ्यो मात्र भन्न मन लाग्यो । फलस्वरुप, प्रयोगशालासम्बन्धमा घोत्लन मन लागेन । अनि, मेरो लेखाइलाई पाठशाला, कार्यशाला, रंगशाला र मधुशालामा खुम्च्याउन खोजेँ । यी चार पक्षको उचित विकास र प्रयोगमात्र गर्न सके पनि नेपालको विकासले गति लिने मेरो ठहर थियो । लेख्न बसिरहँदा म मधुशालाको ग्राहकभन्दा कम मात्तिएको थिइनँ, तर लेख्दै जाँदा उत्साहको वेग घट्दै गयो । मानौँ कि, पाठशालाको परीक्षा दिएर रिजल्ट हुने दिन बिलखबन्द पर्दै कुरिरहेको परीक्षार्थीजस्तो बनेर लेखिरहेँ, नतिजाको अन्दाज छैन । याने कि, मलाई शंका थियो कि कतै मैले पाठकहरुको बहुमूल्य समय बहुलठ्ठी विषयमा त खर्च गराइन भनेर । एउटा कुरा भने मलाई छाप परिसकेको थियो कि पाठशाला, कार्यशाला, रंगशाला र मधुशाला गरी चारवटा शालामा ठूलै रुपान्तरण नगरी मेरो मुलुक बन्दैन । यही सेरोफेरोमा चर्चा अगाडि बढ्नेछ ।
‘शाला’ को शाब्दिक अर्थ बस्ने वा काम गर्ने ठाउँ हुन्छ । यस्तो ठाउँ, बास, घर, कुटी, कोठा आदि जुनसुकै रुपमा हुन्छ । अब यसमा भवन, महल, मल, प्लाजा, रिसोर्ट, एपार्टमेन्टलगायतका संरचनाहरु पनि यसमा पर्न सक्ने देखियो समयक्रमसँगै । घुम्ती पाठशाला, भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत हुने कार्यशाला पनि यसमा समेटिने भैहाल्यो । जे होस्, उचित सुधारसहित यी शालाहरु हाम्रो समाजलाई सुधार गर्नका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । अनि, सञ्चालकहरुले र सरोकारवालाहरुले पनि सुदृढ खालका शालाहरुको पक्षमा मेहनत गर्नुपर्ने र इमानदारिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ समाज सुधारका लागि विशेष अर्थ राख्ने तिनै चार शालाको सन्दर्भमा संक्षिप्त चिनारी समेटिएको छ :
शाला नं १ पाठशाला– विद्यार्थी वा छात्रछात्राहरुलाई शिक्षा दिइने वा पढाइने घर, विद्यालय, स्कुल
पाठशाला यस्तो स्थान हो जहाँ हामीलाई असल व्यक्ति, नागरिक र अगुवा बन्न सिकाइन्छ, सिकाइनुपर्छ । स्कुलदेखि कलेजसम्मका पाठशालाहरुको साझा विषय भनेको यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो समाज, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो कर्तव्य र हाम्रो आनीबानीसम्बन्धमा पनि सिकाइनुपर्छ र परिणामस्वरुप काम लाग्ने खालको संस्कृति र क्षमतासहितको व्यक्ति समाजमा फर्कनुपर्छ । तर, यस्तो शाला नै सफा छैन, पानी चुहिने छाना छ, कपडा च्यात्ने खालको डेस्कबेन्च छ भने घरदेखि टाढा पठाएर असल वा ठूलो÷ठूली मान्छे बन्ने अभिलाषा कसरी पूरा होला ? विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउने शिक्षक नै आफू समयपालन गर्दैन, मनपरी खान्छ वा मनपरी बोल्छ भने विद्यालयप्रतिको विश्वसनीयता के होला ? गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानविशेषको जनसंख्या एवं सिकाइको मागअनुसार विद्यालयको किसिम र संख्या तोक्ने तागत स्थानीय सरकारले राख्नुपर्दछ र यसका लागि विधि वा कानुनको नमुना बनाएर संघीय र प्रदेश तहले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा दिने पाठशालाहरुमा नियमित पठनपाठन जरूरी छ, न कि राजनीतिक थलो बनाई अस्थिर बनाउने र रणभूमि बनाउने जस्तो कार्य । जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि केही कुरा सिक्ने स्थलका रुपमा पाठशाला कस्तो बन्दछ त्यस्तै हाम्रो भविष्य बन्नेछ । हामीकहाँ नमुना बनेर देखाएका राम्रा विद्यालयहरु पनि नभएका होइनन् । जसले मेहनत गरे राम्रो गरे । ती विद्यालय निजी वा सरकारी जुन कित्ताका भए पनि अरुलाई उदाहरण बने । अरुले सिकेनन्, सुधार गर्न सकेनन् त त्यो नसिक्नेकै कमजोरी भयो । यदि सुदूर भविष्यसम्म पनि स्थिति कमजोर बन्दै जान्छ भने त्यस्ता विद्यालयवरपरको तुलनात्मकरुपमा राम्रा विद्यालयसँग गाभ्नु नै सुधारको बाटो हुन सक्छ । विद्यालय वा पाठशाला सुधारका लागि सापेक्षिक उपाय हुन्छन्, अर्थात स्थानविशेष वा पाठशालाविशेषका कमजोरी र अवसर केलाएर सुधारका उपाय अवलम्बन हुनु जरूरी छ । स्थिर सरकार भएको अवधिमा पनि पाठशाला सुध्रेनन् भने हाम्रो ध्यान नवीनतम चिन्तन गर्न सिकाउने शिक्षामा हैन कि टापटिप शिक्षामा अल्झेको आरोप नयाँ पुस्ताले लगाउनेछ र जवाफ दिनका लागि हामीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ हुनेछैन ।
शाला नं २ कार्यशाला– यन्त्र आदिको मर्मत, निर्माण, प्रयोग आदि गर्ने कारखाना, ज्यासल, काम गर्ने ठाउँ ।
उत्पादन गर्ने स्थान रोजाइमा परे पो कार्यशालाहरु एवं श्रमशालाहरु देख्न पाइन्छ, अनि नयाँ–नयाँ उत्पादन गर्ने तिनका प्रयोग सिकाउने वा मर्मत गर्ने कामले स्थान पाउँछ, अनि रोजगारी दिन्छ । हामीकहाँ त उत्पादनका कामलाई दुःख गर्ने ठाउँ मानिएको छ । उद्योगी वा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन कम छ, बरू कुरा गरेर खाने, पेपर प्रस्तुत गर्ने काम बढी हुन्छ । यस्ता नाममात्रका कार्यशालामा के गर्नुपर्दछ भन्ने सिकाइन्छ न कि कसरी गर्ने ? कहाँ कुन वस्तुको सम्भावना छ भन्ने कुरा कमै चिन्तन गरिन्छ । अर्थात्, कार्यशाला गोष्ठी हामीकहाँ ज्यादा प्रयोगमा छ । कार्यशाला गोष्ठीमा केही पनि काम लाग्ने विषय हुँदैन भन्ने पनि होइन । कुनै संगठनको व्यवस्थापन गर्न र सिकाइ आदानप्रदान वा अद्यावधिक गर्ने अवसर यसमा मिल्दछ र मिल्नुपर्छ । अब हामीकहाँ बढीभन्दा बढी यन्त्रशाला अनि कार्यशालाको खाँचो छ । कहिलेकाहीँ कार्यशाला गोष्ठी पनि चाहिन्छ । मान्यता लिनु के प¥यो भने कार्यशालाले केकस्तो सिर्जनात्मक सिकाइ सम्भव तुल्याउँछ र को को सहभागी हुँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्टता ल्याउनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सिर्जनात्मक कामहरुमा उत्रेपछि त्यसबाट आएका अनुभवहरु र भोगाइसमेतका आधारमा कार्यशाला गोष्ठीहरुमा चर्चा÷परिचर्चा, संवादहरु हुनुपर्दछ । विगतका कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अबका कार्यशालाहरुमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उपायहरुका बारेमा समेत चिन्तन भएमा श्रेयस्कर हुन्छ ।
शाला नं ३ रंगशाला– नाटक, नाचगान, खेलकुद आदि कार्यको प्रदर्शन गरिने ठाउँ ।
रंगशाला त्यस्तो पूर्वाधार हो जहाँ हामीलाई शारीरिकरुपमा मात्र होइन मानसिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा चुस्त र तन्दुरूस्त बन्ने वातावरण उपलब्ध हुन्छ र हुनुपर्दछ । यस्तो संरचना आकार हेरी समुदाय तहमा, वडा तहमा र स्थानीय तहमा बन्न सक्दछ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंगशालाहरु बनाउँदा सबै पक्ष र तहको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्दछ । खेल पर्यटनका माध्यमबाट समृद्धिलाई सहयोग गर्ने विषय टाढाको विषय होला, तर साना–ठूला रंगशालाहरु निर्माण गरी नियम, खेल र खेलाडीको प्रवद्र्धन गर्न युवापंक्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । यतिबेला भरतपुरमा निर्माण तयारीको क्रममा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण केही समय कारणवश स्थगित भएर पुनः प्रारम्भ भएको प्रसंगलाई दृष्टिगत गरी सन्दर्भलाई जोडिरहेको छु । यसो गरिरहँदा नेपालका जुन जुन स्थानमा रंगशाला बनाउन प्रारम्भ गरी अलपत्र अवस्थामा रहेका खेल पूर्वाधारहरुलाई पनि सम्झेको छु । ठूला खेल पूर्वाधारका लागि स्थानीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकार, संघीय सरकार मात्र पनि होइन निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज पनि उत्तिकै चासोका साथ अग्रसर हुनु जरूरी छ । कसैले सकी–नसकी सहयोग गर्ने तर अरुले भने टीकाटिप्पणी मात्र गरिरहने नेपाली संस्कारमा परिवर्तन गरी सबैले आआफ्नो क्षमताअनुसार रंगशाला निर्माणका लागि योगदान गर्नु आवश्यक छ । रंगशालाहरु स्थानको उपलब्धताअनुसार हरेक स्थानीय तहमा अनि साना–साना खेलकुद पूर्वाधार सबै वडा तहमा हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
शाला नं ४ मधुशाला– जाँडरक्सी आदि मादक पदार्थ बनाउने, बेच्ने वा खाने ठाउँ ।
मधुशालाहरुको उचित नियन्त्रण तथा मधुरस प्रयोगमा सावधानी हुँदामात्रै पनि धेरै अपराध कम हुने अनि धेरै स्वास्थ्य समस्या हराएर जाने हुँदा मानवीय हितका लागि मधुशालाहरुको छरपस्ट उपस्थिति उपयुक्त नभएको मेरो ठहर छ । विदेश निर्यात गर्ने भए एउटा कुरा उल्टै करोडौँको माल विदेशबाट ल्याई सेवन गर्नु देशको समृद्धिका लागि कुनै पनि हिसाबले उचित छैन । यो विषय निर्र्वािचत पदाधिकारीहरु एवं अर्थतन्त्रका अग्रजहरु र सामाजिक परिवर्तनका अगुवाहरुले पनि चिन्तन गर्नुपर्ने पो हो कि ? एकैपटक प्रयोग शून्यमा झार्न सांस्कृतिक हिसाबले र जनजीविकाको कोणबाट पनि नमिल्ला, तर वि सं २०५२÷५३ तिरैबाट जाँडरक्सी उत्पादन र सेवनविरूद्ध उर्लेको आमा समूहको आन्दोलन किन सेलायो ? स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मदिराको उत्पादन, बेचबिखन र सेवनलाई व्यवस्थित गर्ने पहल पो गर्ने हो कि ? मदिरा सेवनका लागि गाउँपालिकाबाट जारी परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भनेर बाजुराको एउटा गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले पनि यतातिरै संकेत गरेको छ ।
हामीलाई बिगार्ने, समय तथा स्वास्थ्य नोक्सान गर्ने र समाजका युवामा खराब लत विकास गर्ने वातावरण मधुशालाले गरिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको मधुशालाहरु बन्द गर्ने नै हो । तथापि, तत्कालीन कार्यसूचीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित उत्पादन एवं बिक्रीवितरण हुनुपर्दछ । अलिकति उचाइ पुग्न पाएको हुँदैन जाँडरक्सीको गन्धले सुगन्धहरुलाई छोपिदिन्छ, बरू पानी नपाइएला तर रक्सी पाइन्छ । अन्न कुहाएर बन्ने यो तरल पेय पदार्थले दिने अल्पकालीन न्यानो र उत्तेजना हाम्रो दूध, घिउबाट हुँदैन र ? कुरा केमात्रै हो भने दूध, घिउका लागि अन्न कुहाउनेभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्दछ, पसिना बगाउनुपर्छ । हामी नेपालीमा परिश्रम गर्ने बानी हराएर गएको छ, उद्यमी होइन व्यापारी बन्ने झुकाव छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन भने हाम्रो समाज अनि हाम्रो अर्थतन्त्र पराधीन र क्षणिक आनन्द दिने खालकोमा सीमित रहनेछ, दिगो विकास र समृद्ध अर्थतन्त्र नारामा सीमित रहन्छ । रक्सीले छाडेको व्यक्तिमा हुनेजस्तै निराशा हामीमा रहने जोखिम छ । यो भयावह स्थितिको परिकल्पनाले मलाई थप घोत्लिन मन लागेन, लेखनीलाई विश्राम दिन चाहेँ ।
यो लेखको विश्रामले माथि उल्लेखित चार शालाहरुमा सुधारको अभियानमा निरन्तरता र थप गतिशीलताको माग गर्दछ । वास्तवमा यो लेखकले उल्लेखित चार शालाको चर्चा गर्ने विचार पैदा गरेको दृश्य भने काठमाडौँ, कुलेश्वरस्थित ‘मधुशाला’ लेखिएको बोर्डबाहेक अरु थिएन । हाम्रो गाउँ, समाज, सहरबजार जहाँसुकै अति उपभोग भएको तर व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मादक पदार्थ उपरको मेरो विरोध वा आक्रोशको कारण उक्त पसलको नामले मलाई सोच्न वा गम्न बाध्य गराएको होला । अन्य शालाहरु आफैँमा नकारात्मक लागेनन् । प्रयोग गर्दा वा अपनाउँदा हामीले केकस्तो बनायौँ, त्यो कमजोरी हाम्रो आफ्नो हो र सच्चिनका लागि हामी नै तयार हुन जरूरी छ । आउने दिनहरुमा उल्लेखित चार शालाहरुको प्रयोग समाज बनाउन र देशवासीको भविष्य उजिल्याउनका लागि उपयोग हुनेछ भन्ने आशा र भरोसा छ ।
मापसे र चालक अनुमतिपत्र